Zvigadzirwa Chikamu Chikamu
Chinyorwa: Ductile yakakanda simbi inoenderana neASMM-536, Giredhi 65-45-12
Pamusoro Pedza: Standard: Epoxy upfu unhani
Zvingakudetsera: Kwakakurudzira (Zinc kuifukidza 、 HDG) Dip yakapendwa
Pamusoro pevara: Anochinjika ruvara kwesarudzo
Inesarudzo: Nitrile, Silicone, Fluoroelastomer, Neoprene
Iyo yekuisa chisimbiso mashandiro emitsetse yakabatanidzwa uye mekutengesa zvitoro zvakangofanana, chimiro chikuru cheiyo gasket ine "C" chimiro, ichiumba katatu chisimbiso mashandiro.Zvisimbiso zvekutanga zvakaumbwa nekusimba kweiyo gasket panguva yekumira mamiriro. Mushure mekubatanidza yakaiswa, iyo gasket yakavharirwa nedzimba dzegroove coupling kana mekutiki nzira, chisimbiso chechipiri chinoumbwa.Pakati mukati meiyo pombi system pinda iyo "C" mhango mushure mekumanikidza, inowedzera kubatana pakati pegasket muromo nesimbi pombi pamusoro, kuitira kuti uzadzise chisimbiso chechitatu chinoshanda.Iyo yakanyanya kumanikidza kwemvura mukati meipi, zvirinani kuiswa chisimbiso kwekubatanidza.
Semugadziri uye mugadziri weiyo yakakwenenzverwa coupling tekinoroji, CNG inopa dzakasiyana siyana yekubatanidza saizi uye masitayera eanenge chero pombi yekushandisa.Maoko ese akabatanidzwa anoumbwa nezvikamu zvina, zvinoti dzimba, gasket, bhaudhi uye nati. , Kumusoro kwekupedzisira kuri orenji, asi zvakare kune akasiyana emvura inoyerera pombi yekupa inoenderana color scheme; yakajairwa gasket zvinhu ndeye EPDM, yakagadzirirwawo dzakasiyana siyana pombi midhiya yerabha zvinhu. Iyo bhaudhi yekukosheswa chiyero ikirasi 8.8 uye chiyero cheiyo 8.0 .
CNG kubatanidza kunopa pombi sisitimu nekushomeka kusingawanikwe mune dzimwe pombi nzira dzekubatanidza.CNG yakaoma uye inoshanduka couplings inogona kusanganiswa kubvumidza yekupisa kukura mukati meiyo system. Pamusoro pezvo, kushandiswa kwematatu anoteedzana anochinjika ekubatanidza kunoderedza ruzha uye kudengenyeka uye kunobvisa zvinodhura ruzha zvinodzivirira. .
Maumbirwo esocket type solid solid coupling, ine yemukati neyekunze echikadzi neyemurume mazino, socket mhando, meshing dhizaini, iko kushandiswa kwemukana pakati pechikadzi nehurume chiteshi chekoti kusanganisa kwepombi uye kwemajoini meshing kuti zviite zvakaoma .
Nekuda kweyakagadziriswa interface chimiro, hazvisi nyore kugadzira iyo gasket kuburitsa inoyambuka uye oblique twists uye kutendeuka, kumiswa kweiyo gasket kwakanyatsojeka, iko kusanzwisisika kudzvanya uye kunoparadza kumanikidza kurasikirwa kweiyo gaskets kunodzivirirwa, iko kuiswa chisimbiso kuri yakawedzera, uye iwo mubatanidzwa wese wakawedzera hupenyu hwebasa.
Iyo Angle-pad solid solid coupling yakagadzirirwa kutsvedza pane kutwasuka kana ichiomesa imba.Saka pombi yakanyatso batika kuti iite kubatana kwakasimba. kunze kwemicheto kweiyo groove kuitira kuti axial uye radial kufamba kweiyo chubhu irege kuitika uye mhedzisiro yeyakaomarara yekubatanidza pombi inowanikwa zvechokwadi.
Uku kuomarara kwakabatana kunobvumidza kumisikidza chaiyo pombi uye nekugadzira yakagadziriswa chubhu yekupedzisira kupatsanurwa iyo inofanirwa kutariswa mukugadzirwa uye kuiswa